Tababarka Qiimaynta Khatarta
Wacyigelinta Amniga Internetka
Tababarka Qiimaynta Khatarta Internetka
Aqoonso oo ilaali hantidaada halista ah adoo samaynaya qiimayntaada halista ah
Xulashada 1-Tababarka Waji-ka-Wajiga ah
Koorsadan oo labo maalmood ah, kaqeybgalayaashu waxay ku bartaan sameynta qiimeynta halista amniga macluumaadka. Habkayagu wuxuu ururrada siiyaa hanaan dhammaystiran oo diiradda saaraya hantida macluumaadka ee ku jira xaaladdooda hawl. Waxaad adeegsan doontaa qalabkii ugu dambeeyay ee maareynta halista elektiroonigga ah inta koorsada aad socoto oo dhan.
Inta koorsada aad socoto, waxaad kaqeybqaadi doontaa leylisyada fasalka dhexdiisa ah iyo doodaha, oo ay kujiraan howlaha loogu talagalay aqoonsiga halista, falanqaynta, iyo jawaab celinta.
Kadib markay koorsada dhammeeyaan, kaqeybgalayaashu waxay awoodi doonaan inay:
Ururi oo abaabulo macluumaadka halista adoo adeegsanaya wareysiyo, dib u eegis dukumiintiyo, iyo falanqeyn farsamo
Abuur shuruudaha qiimeynta halista
Aqoonsiga, lafagurida iyo mudnaanta koowaad siiso halista amniga ee macluumaadka.
Hagaajinta waxqabadka maareynta nuglaanta adigoo u arkaya xaalad qatar ah
Fahmaan sababta maaraynta halista hawlgalku muhiim ugu tahay maaraynta khatarta shirkadda
U diyaari istaraatiijiyooyin looga jawaabayo halista ku haboon shuruudaha ganacsi ee ururka
Iyaga oo diiradda saaraya halista hawl ee hantida macluumaadka, kaqeybgalayaashu waxay bartaan inay eegaan qiimeynta halista iyadoo lagu saleynayo ujeeddooyinka istiraatiijiyadeed ee ururka iyo dulqaadka halista.
Ikhtiyaarka 2-Qiimeynta Khatarta Internetka Tababarka Khadka
Faa’iidada tababarka khadka tooska ah waa inaad istaagi karto talaabo kasta, tag oo aad fulin karto ama aad baari karto waxa aad u baahan tahay ka hor intaadan u gudbin tallaabada xigta. Habkani macnihiisu waa dhamaadka koorsada; waxaad dhammeyn doontaa Qiimeynta Khatarta Internetka ee hay'addaada.
Kumaa ah inuu sameeyo koorsada?
Shakhsiyaadka doonaya inay awood u yeeshaan inay ku fuliyaan naftooda qiimeynta halista guryaha
C-Suite, Xirfadlayaasha Amniga, qorsheeyaasha sii socoshada ganacsiga, shaqaalaha u hogaansanaanta, maareeyayaasha halista iyo kuwa kale
Shaqaaluhu waxay u baahan yihiin inay sameeyaan qiimeyn rasmi ah oo qatar ah si ay u qanciyaan shuruudaha PCI-DSS
Farsamayaqaannada Teknolojiyada Macluumaadka ee doonaya inay kordhiyaan aqoontooda ku saabsan nabadgelyada internetka
© 2021 waxaa qoray Cyber365